Lungaqedwa kalula uchungechunge lweziteleka emanyuvesi - Bayede News
Mnu uMusa KMB Mpanza, usebenza ngokuzimela ekuthuthukiseni ubuholi kubantu abasha…
Sekukaningi sibona iziteleka ezikhungweni zemfundo ephakame njalo ngasekuqaleni konyaka. Mhlawumbe kulo nyaka kuzoba ngcono ngenxa yokhuvethe oluvimba ukuthi bonke abafundi bazifikele mathupha ezikhungweni zemfundo.
Lo mkhuba weziteleka usuthanda ukuba insakavukela umchilo wesidwaba ngoba wenzeka minyaka yonke ikakhululakzi emanyuvesi. Sonke siyakuqonda ukuthi izikhungo zemfundo ephakeme ziphathwa abantu abafunde kakhulu baze bafika emazingeni okuba ngosolwazi. Ngakolunye uhlangothi zikhona izinhlaka ezifana no-Universities South Africa (USAf), iSouth African Union of Students (SAUS) kanye neNational Students Financial Aid Scheme (NSFAS) zonke lezi zinhlaka ziyakwazi ukuxhumana noHulumeni ezingeni likazwelonke. Ngaleyo ndlela lezi zinhlaka zingabamba inguyazana zonke futhi endaweni eyodwa bese kutholakala indlela eya phambili. Umbuzo uthi kungani pho kwezinye izikhathi kuba nzima ukuthola isisombululo ezinkingeni ezibhekene nezikhungo kanye nabafundi?
Ake sibhekisise ukuthi inkinga iqala kuphi? Inkinga ekhona ngobuholi babafundi ikakhulukazi abasuke sebekhethiwe ukuthi babesemkhandlwini wabafundi iStudent Representative Council ngamafuphi, ezikhathini eziningi banakho ukusheshe bakhohlwe izidingo zabafundi uma sebengene emandleni. Abanye babo abafuni ngisho ukuba ingxenye yokuqeqeshwa nokuhlela kahle izinhlelo abazozenza ngesikhathi sabo emkhandlwini.
Kunalokho bathi bengena nje emkhandlwini bafune izindlu ezinhle abazohlala kuzo, bafune amalaptop nomakhalekhukhwini bohlobo oluphambili kodwa basukumela phezulu uma kuthiwa nalu uhambo bazondiza. Okuxakayo ukuthi uma befunelwa imihlangano ababonwa. Iningi labo uma nje kuke kwaphela uhlelo lokubhalisa onyakeni omusha abaholi banakho ukukhohlwa ezinye izidingo zabafundi kodwa banake kakhulu izinhlelo zokunandisa ezifana namabheshi.
Kwezinye izikhungo inkinga iqala ngezikhathi zokhetho loMkhandlu Omela Abafundi (SRC). Kuyenzeka ukuthi abaphathi bezikhungo babenakho ukufisa sengathi kungangena iqembu noma iqeqebana elithile emkhandlwini wabafundi. Uma kungasenzeki lokho, laba abazophumelela ukhetho bazothwala kanzima ngoba ayikho into efunwa ngabafundi abazoyithola kalula lokho okuphoqa ukuthi abafundi baze babeneziteleka ezihambisana nodlame kanye nokusabisa. Iqiniso elimsulwa ukuthi kunabafundi abanezikweletu okusuke kufanele bazikhokhe ngaphambi kokubhalisela unyaka omusha. Abafundi abanezikweletu kumele bazikhokhe kodwa phela neSRC kufanele ilalelwe uma ikhulumela abafundi kungaze kufikwe kwangqingetshe noma kudlulelwe odlameni.
Iziteleka ezinodlame zishiya ingqalasizinda icekelwe phansi, impahla yesikhungo ilimele, ukufunda kuphazamisekile. I-University of KwaZulu-Natal isibe nezigameko eziningana muva nje lapho kucekelwe khona impahla yesikhungo phansi ngomlilo kanti ne-University of Zululand isike yabhekana nesimo lapho kwaze kwacekelwa phansi ngomlilo amahhovisi eSRC okumanje awakaze alungiswe selokhu ashiswa eminyakeni embalwa eyedlule.
Izikhungo zemfundo zinezinhlaka ezahlukene ngaphakathi lapho kuthathwa khona izinqumo. Abafundi abasemkhandlwini okuyiSRC bayingxenye yalezi zinhlaka ezifana neSenate lapho kudingidwa khona izindaba zokufunda, kube iCouncil okuwumkhandlu owengamele isikhungo, bese kuba iManco/SRC lapho abamele abafundi behlangana khona nabaphathi bezikhungo. Abaholi babafundi banakho ukuzishaya indiva lezi zinhlaka phakathi nonyaka kanti ilapho kuthathwa khona izinqumo ezithinta unyaka olandelayo.
Uma sebekhethiwe abaholi ngenyanga uMandulo iningi labo lithi lifika nje emkhandlwini lijahe izindaba zokunandisa nokuthokozisa abafundi. Sengathi nazo izitshudeni zingathi uma zikhetha zikhethe abaholi abaneso lokupopola izinkinga zisekude bese begxila kuzo ungakaqali unyaka olandelayo. Enye into edida abaholi udaba lokuqokwa kwazinkampani ezizonandisa kumabheshi, banakho abaholi ukufuna ukugxambukela kulezo zindaba angiphathi-ke uma kuke kwasengathi kunesikhulu okungathi sibakhonzile bavele bangabe besalalela muntu noma babenenkani yexoxo uma ubakhombisa indlela izinto ezenziwa ngayo. Le nzukazikeyi uyibona ngisho phakathi nonyaka lapho khona abaholi befika ngoLwesine bethi bafuna kube nomcimbi wokunandisa ngoMgqibelo. Basuke bazi kahle ukuthi imigomo yezimali ayikuvumi lokho kodwa bekwenze ngesankahlu.
Kulo nyaka wezi-2021 angikholwa ukuthi zingabaningi iziteleka ngenxa yokhuvethe olugubuzele umhlaba. Nalo njalo ukhuvethe seluvundulule ezinye izinto ezikhombisa ubuthakathaka bezinye izikhungo zemfundo. Kukhona ezihluleke zancama ngisho ukuhlinzeka abafundi ngezinsiza kufundisa ezifana nedatha, amalaptop kanye nezincwadi okuthiwa ama-Ebooks. Lezi ngezinye zezingqinamba ebezinganakiwe imikhandlu yabafundi phambilini kodwa manje seziwumgogodla wokufunda nokufundisa emanyuvesi. Ngakolunye uhlangothi, ngiyalinganisa nje, ungathola ukuthi abaphathi bezikhungo bayitholile imihlomulo yabo yokuphela konyaka nakuba izikhungo abazengamele zingenzanga kahle ekufundiseni ngenxa yokhuvethe. Kumanje nje ezinye azikaqedi ngisho unyaka wezimali wezi-2020 ekubeni ezinye ziwuphothulile unyaka wazo kwabhalwa ngisho izivivinyo zokuphela konyaka ngawo unyaka owedlule.
IChina ithembisa ukuba seqhulwini kwezobuchwepheshe
Imikhandlu yabafundi ngingayifanisa negunundu lokuqeqesha abaholi ngezinto eziningi ezithinta ubuholi nokunakekela abafundi. Kuwumkhuleko wami ukuthi abaholi bafundiseke futhi balalele uma betshelwa. Kuleli zinga abaholi bayaqeqeshwa, bahambele imihlangano esezingeni eliphezulu ethinta abafundi nezidingo zabo kanye nokuphathwa kahle kwezinto zemfundo. Ngaleyondlela akusiwo umsebenzi wesikhungo ukwenza izinto zibelula kubaholi kodwa abaholi kumele babenendlela yokubambisana nabaphathi ukuze kubelula ukuqeda iziteleka ezinodlame emanyuvesi.
Sengiphetha, uhlaka iManco/SRC ukuze lube nomhlangano kufanele umkhandlu wabafundi ulethe zonke izinto abafuna zixoxwe emhlanganweni emasontweni amathathu kuya kwamane ngaphambi kosuku lomhlangano. Uma kukhethwe umabhalane womkhandlu ongakwazi ukuhlela izinto kusenesikhathi lowo mhlangano angeke ube khona. Ngaleyondlela lokhu kusho ukuthi kuzoba nezinkinga ngonyaka olandelayo. Abaholi babafundi abakukhuthalele ukufunda kubaphathi, baphinde bakujwayele ukuzilungiselela kahle njalo uma bezohambela imihlangano yesikhungo. Izinto ezithinta unyaka olandelayo mazixoxwe ngawo lowo nyaka abakhethwe ngawo.
Abaholi bangazixaki ngokufuna ukuthandwa abaphathi futhi bangalinge becabange ukuthi ukucekela phansi izinsiza kufunda zesikhungo kuzoxazulula izinkinga kunalokho kulimaza bona. Ngiyazi ukuthi izikhulu zifuna ezikhungweni kuqhubeke ukufunda futhi kube nokuthula kanti ngakolunye uhlangothi abaholi bavele basabise ngodlame lokhu okwenza ukuthi izinkinga zingaxazululwa ngale ndlela yokuthi angeke zisavuka ngonyaka olandelayo.
Ngakho ngithi kubaholi limani indima yenu, anidingi udlame, ukusabisa, nokuvala amasango ezikhungo. Enikudingayo ukuthi nihleleke, nikhulume ngazwi linye kusenesikhathi, niphinde nibumbane. Celani imihlangano nabaphathi kusenethuba.
nguMusa KMB Mpanza Jan 15, 2021